Magaca Shiinaha ee jeebka haysta kiis ganacsi aqoonsi sanduuqa sanduuqa sanduuqa xafiiska ganacsiga ee maalinlaha ah ee ragga dumarka wax soo saara iyo alaab-qeybiyeyaal | Camei Ele&warshadaha
Kiis ganacsi oo haysta kaarka magaca jeebka aqoonsiga sanduuqa sanduuqa sanduuqa sanduuqa xafiiska ganacsiga ee isticmaalka maalinlaha ah ee dumarka
Shayga NO. : 2611 Haysta kaadhka magaca
Waxyaabaha: maqaarka PU
Midabka: Brown, casaan, fuchsia
Boorsada kaadhka la qaadan karo ee Ca-Mei ee loogu talagalay kuwa raba inay hagaajiyaan jeebkooda. Ma ka qoomamayn doontid iibsashada bacda kaadhkan.
Cilmi-baadhisteenna, si fudud u qaadid iyo si ku habboon mushaharku u noqdaan kuwo casri ah, lacagta caddaanka ah maaha mid caan ah sidii hore, jeebka dhaqameed ee weyn ee jeebkaagu kuma habboona noloshayada maanta. Markaa waxaanu helnaa habab ka wanagsan oo lagu qaado oo lagu ilaaliyo kaadhadhkaaga iyo lacagta caddaanka ah. Nashqadayaasha Ca-Mei waxay geliyeen fikradooda hal-abuurnimo ee noloshooda boorsadan, waxaa loo sameeyay si loo qanciyo dadka doonaya inay si ku habboon u qaataan lacag caddaan ah iyo kaararkooda, ujeeddadeennu waa inaan nolosha ka dhigno mid wanaagsan.
Awood weyn- Buugga kaadhka ganacsiga waxa uu la socdaa 10 bog oo gacmaha ah oo PVC-ga ah oo laba-dhinac ah iyo 2 jeebab oo dhinac ah, waxa uu hayn karaa ilaa 50 kaadhadhka ganacsiga ama kaadhadhka deynta (iyada oo ku xidhan dhumucda kaadhka). Cabbirka kaarka ugu badan ee ku habboon: 3.6″ x 2.2″. Lagu dabaqi karo kaararka xusuusta, ganacsiga iyo kaararka gaarka ah, aqoonsiga iyo kaararka deynta, iwm.
La qaadi karo & habboon- Cabirka: 105*70*8 MM. Naqshadaynta caatada ah iyo nakhshad fudud ayaa ka dhigaysa haystaha kaadhka ganacsiga mid fudud in la qaado. Ka dhig kaadhadhkaaga ganacsi kuwo wanaagsan, nadiif ah oo gacanta ku haya mar kasta.
Fudud in la dhex maro oo la helo kaararka- Gacmaha PVC ee tayada sare leh waa caddayn xoqan si ay u bixiyaan caddaynta ugu wanaagsan ee daawashada fudud. Guud ahaan 12 bog Bog kastaa wuxuu ka kooban yahay 3 boos oo gaar ah oo kuu oggolaanaya inaad dib u dhigto kaadhadhka dhabarka mar haddii bogag laba-geesood ah ay muuqdaan.
Qalab waara- Kaarka ganacsigayaga qabanqaabiyaha waxa uu ka samaysan yahay PU-da biyaha u adkaysan kara, oo lagu xoojiyey cidhifyo xidhan iyo gacmo-gacmeedyo kaar ganacsi oo PVC ah oo waara.
muuqaal xirfadeede- Madow qadiimiga ah oo leh muuqaal qurux badan oo qurux badan, kaadhka qaab-buugga haysta wuxuu ku siin karaa qadarin iyo fursad dheeraad ah. Waa hadiyad ku habboon qoyskaaga, saaxiibbadaa, macaamiishaada, saaxiibbadaada, ama shirkad xusuus ahaan ah!
Unisex- Marka la eego naqshadahooda jilicsan & dhismaha maqaar siman, kuwani waa bacaha caatada ah ee caanka ah ee haweenka iyo ragga. Waxay u sameeyaan fikrado hadiyadeed oo weyn oo loogu talagalay socotada noloshaada! Ku habboon dadka da' kasta leh.
Habka farsamada- Saxanka tijaabada dhalmada ka hor- Goynta agabka- Sii daynta walxaha- Xabagta- Tollida- Xidhmada
Xakamaynta tayada- Hubinta agabka& u qalma- Aqoon-is-weydaarsiga QC- hubinta kormeeraha wax-soo-saarka- Jeegaga kormeeraha oo dhammeeyey- jeegag maamulaha bakhaarka- jeeg AQL
Hore: Iibinta kulul ee shandad yar oo wax lagu xidho leh oo leh xadhig laastikada ah qalinka xidhitaanka iyo qalin qalin adag
Xiga: Shandad gacmeed oo go'an dhalaalaysa shandad gacmeed oo balaastiig ah, kubado cad oo PVC ah oo lagu qurxiyo boorsada safarka ee xeebta
Haysta kaarka magaca jeebka
Bacda garabka oo leh suunka garabka lagu hagaajin karo